Madagasikara: Iza ireo kandidà lehibe ho filoham-pirenena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2018 5:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, አማርኛ, Ελληνικά, عربي, Français
Tsy maintsy mandeha mandrotsa-bato hifidy izay ho filoham-pirenena mialoha ny fotoam-pahavaratra, izany hoe alohan'ny oktobra 2018 farafahatarany, ny Malagasy. Izany no fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana (HCC) hamaranana ny fanjavozavoana ara-politika sy ny fihetsiketseham-panoherana. Saingy tsy manome antoka ny lasan'ireo kandidà lehibe ho filoham-pirenena.
Nanapa-kevitra ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana (HCC) tamin'ny 28 avrily, amin'ny handidiana ny fananganana governemantan'ny marimaritra iraisana. Nanomboka ny asany izany tamin'ny 12 jona ary iraka ampanaovina azy ny hamoahana ny firenena amin'ny krizy politika amin'izao fotoana izao. Notendren'Atoa Hery Rajaonarimampianina ho filohan'ny governemanta Atoa Christian Ntsay, mpiasa ambony ao amin'ny Fifandaminana Iraisampirenen'ny Asa. Manomboka izao, amin'ireo minisitra 30 mandrafitra ny governemanta, dia [folo mahery] no avy amin'ny mpanohitra.
Hoy ny fitarainany hoe: